Apple dia namoaka ny beta fahefatra an'ny iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ary macOS Monterey | Vaovao IPhone
Roa herinandro lasa izay dia natombok'i Apple ny beta fahatelo ho an'ny mpamorona ny rafi-piasany rehetra aseho ao amin'ny WWDC 2021. Ity beta fahatelo ity dia nahitana vaovao tsy hita hatramin'izao tamin'ny betas teo aloha. Ny valin'ny fitsapana ny rafitra dia mbola tsara. Na izany aza, mpandraharaha maro no mbola tsy sahy manova fiovana lehibe toa ilay azontsika atao amin'ny Safari. Na eo aza izany dia manohy hatrany ny Apple fizotry manokana ary mandefa ny beta fahefatra ho an'ireo mpamorona ny rafitra rehetra ao aminy: iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 ary macOS Monterey.
Beta fahefatra hanohizana ny fanovana ny rafitra fiasan'i Apple
Raha manana an'io mpampiorina voalaza etsy ambony io ianao napetraka amin'ny iray amin'ireo fitaovanao mety manana fampandrenesana ao amin'ny fampiharana Settings ianao. Ity no fanombohana ny beta fahefatra ho an'ny mpamorona ao anatin'ny Programan'ny Apple Developer. Raha tafiditra ao amin'ny programa beta ho an'ny daholobe ianao dia tsy hanana fampandrenesana satria ity kinova vaovao ity dia misy fiantraikany amin'ny mpamorona fampiharana sy mpanatsara ny rafitra fotsiny.
Ny kinova vaovao an'ny iOS sy iPadOS 15 Manana ny kaody 19A5307g. Fa kosa, ny fananganana watchOS 8 amin'ity kinova vaovao ity dia 19R5312e. Ilaina ny mahatadidy fa ny fametrahana ny fanavaozana ao amin'ny watchOS 8 dia ilaina ny manavao ny beta fahefatra ny iPhone miaraka amin'ny iOS 15. Ny sisa amin'ny fanavaozana dia tvOS 15 napetraka tamin'ny alàlan'ny fametrahana profil vaovao amin'ny alàlan'ny Xcode ary macOS Monterey izay hita ao amin'ny System Preferences ny fanavaozana azy.
Mety hahita isika vaovao amin'ity beta fahefatra ity satria tsy maintsy mandefa ireo fanavaozana rehetra izay navela ny tanany aorian'ny WWDC 2021 i Apple. Mbola ho hita ihany koa raha toa ka manapa-kevitra ny Big Apple fa hanao ilay dingana voalohany mankany amin'ny Safari vaovao na raha aleony ny manome azy io dia miverena. ny volavola sy ny firafitry ny iOS 14, ary miandry ny fandefasana azy amin'ny ho avy iOS sy iPadOS 15.1.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia namoaka ny beta fahefatra an'ny iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ary macOS Monterey
Apple dia mampifantoka ny ezaka amin'ny Touch ID eo amin'ny efijery